हुम्लामा सडक खन्ने क्रममा स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृ’त्यु !! - Onlinenews Global
हुम्लामा सडक खन्ने क्रममा स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृ’त्यु !!
June 29, 2021 laxmiLeaveaComment on हुम्लामा सडक खन्ने क्रममा स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृ’त्यु !!
हुम्लामा सडक खनिरहेको बेला पहिराेमा स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृत्य भएको छ । अदानचुली गाउँपालिका-५ को सेरामा सडक खन्ने क्रममा स्काभेटर पुरिँदा बर्दीया घर भएका २६ वर्षीय चालक सन्तोष थारूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका डिएसपी हेरम्ब शर्माले जानकारी दिए ।
स्थानीय र प्रहरी मिलेर चालकको शव निकालिएको छ । अहिले शव श्रीनगर स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको छ । सोमबार बेलुका ६ बजेतिर सडक खन्ने क्रममा उक्त दुर्घटना भएको हो । स्काभेटरका सहचालक भने हाम फालेर बाँचेका छन् । घटनास्थल पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट दुइ दिन लाग्ने डिएसपी शर्माले बताए ।
***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
यो पनि कृषकलाई ट्र्याक्टर हस्तान्तरण
भरतपुर महानगरपालिकाले कृषकहरुलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ । महानगरले कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पु-याउन ५० प्रतिशत अनुदानमा ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएको हो । महानगरले सोमबार छ वटा ट्र्याक्टर र एउटा हाते ट्र्याक्टर किसानलाई वितरण गरेको छ ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले एक कार्यक्रमका बीच किसानहरुलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । महानगरमा परेका ४३ वटा आवेदनबाट छनोट गरेर १३ वटा फार्मलाई मागअनुसारको उपकरणमा सहयोग गरिएको हो । महानगर प्रमुख दाहालले महानगरपालिले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर
अगाडि बढेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमा आफूहरुले जोड दिएको उल्लेख गर्दै दाहालले कृषिमा लागत घटाएर उत्पादन बढाउन निरन्तर खटिएको बताउनुभयो । महानगरमा पशुपालनमा पनि उच्च सम्भावना रहेकाले यो क्षेत्रमा लाग्ने किसानलाई हौसला प्रदान गर्न दूधमा प्रतिलिटर
रु तीन अनुदान दिन थालिएको दाहालको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महानगर उपप्रमुख ठकुरीले किसानलाई कृषि पेशाबाटै सबल बनाउने उद्देश्यसहित कृषि उपकरण वितरण गरिएको बताउनुभयो । कृषि प्रधान देशमा किसानहरु निराश बनेको र युवा पलायन हुने स्थिति आएकाले अब युवालाई यही कृषि कर्ममा सरिक बनाउन
आफूहरु लागेको उहाँको भनाइ थियो । प्रति ट्र्याक्टर रु १६ लाख ५२ हजार लागत मूल्य रहेको र महानगले रु आठ लाख अनुदान सहयोग गरेको महानगरको कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
साबधान ! नेपालमा फेरी बज्यो खतराको घण्टी, निषेधाज्ञा खुकुलो हुनै लाग्दा आयो यस्तो समाचार
आज दोहोरी गाएक राजु परियारको जन्मदिन ,फोटोमा छोएर आ’शिर्वाद दिदै से’यर गर्नुहोस
पानीमा तैरिने ढुंगा भेटियो, दर्शनका लागि भक्तजनको भिड थप जानकारी का लागि पूरा समचार पढ्नुहोस्
July 1, 2021 laxmi
काबुल एयरपोर्ट आक्रमणका सम्बन्धमा बोल्यो चीन
August 28, 2021 laxmi
पृथ्वी पर ‘जनसंख्या पतन’ की चेतावनी, एलोन मस्क ने मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण का आह्वान किया
January 22, 2022 vaishnavi
शाहरुख़ खान के बेटे को हाथ लगनी कीमत : नौकरी ही हाथ से धो बैठे आर्यन के केस अफसर समीर वानखेड़े
शिल्पा शेट्टी के5सब से गंदे विवाद, इन्हे याद कर लोग आज भी देते हैं गाली
अनिल अंबानी जल्द बनने वाली हैं बहू : ख्रिशा शाह
ये है उन जानेमाने स्टारकिड्स की लिस्ट जो इस साल (२०२२) बॉलीवुड में एंट्री करेंगे, आर्यन खान से लेकर सुहाना तक की लिस्ट
टॉलीवुड स्टार महेश बाबू फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय अभिनेता , जानिए कितनी संपत्ति ‌के‌ मालिक है